MacOS Sierra 3 Veruzhinji Beta 10.12.4 Zvino Yava Kuwanikwa | Ndinobva mac
Rimwe zuva zvakatora Apple kuvhura vhezheni yacho macOS Sierra 10.12.4 Veruzhinji Beta ine bug fixes uye diki bug fixes inowanikwa mune yapfuura beta. Nemhando idzi dzeveruzhinji beta, vashandisi vasina account yepamutemo yekuvandudza vanogona kuona uye kuyedza maficha matsva akaitwa mushanduro iyi nyowani yeMac operating system. Kupinda muchirongwa cheshanduro idzi beta mahara zvachose uye vashandisi vanoda kuishandisa muchawana chekuburitsa chinongedzo panoperera chinyorwa chino.
Iyi vhezheni inowedzera hutsva hweNight Shift paMacs, chimwe chinhu chakagarwa nhaka kubva kuApp inoshanda sisitimu, uye chiri chakanakira isu tese vanopedza maawa mazhinji pamberi peMac skrini yedu. gadzirisa maduku madiki, gadziridza mashandiro ehurongwa uye kugadzikana, iyi ndiyo yechitatu yeruzhinji beta uye pasina kupokana hapana shanduko kubva kune yekuvandudza beta yakaburitswa nezuro masikati.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vanoda kutora chikamu mune macOS Sierra yeruzhinji betas uye unakirwe nezvitsva zvinoitwa mushanduro idzi, tinokurudzira kushandisa chipatara kunze kwenzira yako yekushandisa zvisinei nekuti zvese zvinoshanda mushe kubva pakutanga, saka unogona kuyedza nhau pasina njodzi. Usakanganwa kuti kumwe kunyorera, maturusi kana mashandiro anogona kunge asingaenderane neshanduro dze beta, saka usaise izvi seye huru yekushandisa system. Chero zvazvingaitika, iyi link yekunyoresa uye kugona kurodha idzi nhau pakombuta yedu pamberi pevazhinji vashandisi tinobva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » MacOS Sierra 3 yeruzhinji beta 10.12.4 yave kuwanikwa
Mhoroi, ini ndangoisa beta 10.12.4 vhezheni 3 pane yangu macbook pro asi iri kundipa kukundikana, kana uchibatanidza mahedhifoni ruzha harubude uye ruchiramba ruchizadza vatauri vemukati memac sekunge pasina chinhu chakabatana. mumwe munhu achapa iyi mhosva? kana kuti iri mac dambudziko?